ဘားကုဒ်ကဒ်, RFID ဘားကုဒ်ကဒ်, QR Code ကိုကတ်, ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ဘားကုဒ်ပလတ်စတစ်ကဒ်, ဘားကုဒ် PVC Card ကို, QR Code ကို PVC Card ကို
RFID ဘားကုဒ်ကဒ်, QR Code ကိုကတ်, ခရမ်းလွန်ပရင့်ထုတ်ရန်ဘားကုဒ်ပလတ်စတစ်ကဒ်
သည်အခြားအမျိုးအစားကဒ် ဘားကုဒ် PVC Card ကို, QR Code ကိုကတ်, RFID ဘားကုဒ်ကဒ်, ခရမ်းလွန်ဘားကုဒ်ပလတ်စတစ်ကဒ်, ခရမ်းလွန်ပရင့်ထုတ်ရန်ဘားကုဒ်ကဒ်
RFID ဘား Code ကိုကဒ်ပင်မန့်သတ်ချက်များ
protocol စံ: ISO ကို 14443, ISO ကို 15693, ISO ကို 18000-6C / 6B
RFID ချစ်ပ်: Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, Mifare Ultralight10, Mifare UltralightC, ငါကုတ် SLI ကို / SLI ကို-S က / SLI ကို-L / SLIX, Mifare Desfire2K / 4k / 8K, Mifare PLUS2K / 4K, Ti2048, EM4200, EM4305, EM4450, EM4102, TK4100, T5557, T5577, CET5500, Hitagl, Hitag2, Hitags, FMl208(စီပီယူ), ဂြိုလ်သား h3, Impinj M5, etc.
ပုံနှိပ်ခြင်း: လေးအရောင် offset ပုံနှိပ်ခြင်း, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အခြားပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို
QR Code ကိုမကြာခဏပလပ်စတစ်ကဒ်များ Element တစ်ခုရဲ့အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုအဖြစ်ကဒ် features တွေထည့်သွင်း, ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်များ, စသည်တို့ကို. လွယ်ကူသောစာဖတ်ခြင်းများအတွက်. ဘားကုဒ်ကတ်များကိုလည်း RFID ကဒ်များကိုဖန်ဆင်းချစ်ပ်ထုပ်ပိုးနိုင်ပါတယ်. ဒါ့အပြင်ကဒ်မျက်နှာပြင်ပူဆာ, ငွေသို့မဟုတ်လေဆာရောင်ခြည်ရွှေ, ပေါင်းသံလိုက်အစင်း, စသည်တို့ကို, ပိုပြီး features တွေထည့်သွင်းဖို့.
ခရမ်းလွန်ဘားကုဒ်ကဒ်, ဘားကုဒ်ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့မျက်နှာပြင်လျှင်, ထို့နောက်ဘားကုဒ်သုံးရှုထောင်ခံစားချက်ရှိသည်လိမ့်မယ်, နှင့်ဝတ်ဆင်ယဉ်.
အစင်း၏စည်းမျဉ်းများအစုတခုအတွက်စီစဉ်ပေးဘားကုဒ်ကဒ်, အလွတ်များနှင့်စံချိန်အတွက်ဘားကုဒ်အချက်အလက်များ၏သက်ဆိုင်ရာဇာတ်ကောင်, ဘုံဘားကုဒ်ကိုသင်္ကေတအနက်ရောင်အစင်းများနှင့်အဖြူအလွတ်အားဖြင့် print ထုတ်, ဘားကုဒ်အပေါ်တဲ့အခါမှာထွန်းလင်းအလင်း, အားကြီးသောဆနျ့ကငျြဘထုတ်လုပ်ရန်အနက်ရောင်အစင်းများနှင့်အဖြူအလွတ်, သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖတ်ရှုဖို့အစင်းများနှင့်အလွတ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအလင်းပြန်ကိုသုံးပါ.
ဘားကုဒ်ကဒ် One-ရှုထောင် code နဲ့ QR ကုဒ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားထားတယ်. one-အတိုင်းအတာကုဒ်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောပြင်ထုပ်ပိုးအပေါ်နေ့စဉ်ကုန်စည်ဘားကုဒ်ကို One-ရှုထောင်ကုဒ်ဖြစ်သကဲ့သို့. ၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်သေးငယ်သည်, တစ်ခုသာကုဒ်သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်, ကွန်ပျူတာကွန်ယက်တွင်ဒေတာခေါ်ဆောင်သွားဖို့ဒီကုဒ်မှတဆင့်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ. QR ကုဒ်ကိုမကြာသေးမီနှစ်များတွင်တီထွင်နေသည်, ဒါကြောင့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသိမ်းဆည်းထားရန်ကန့်သတ်အာကာသအတွင်းလုပ်နိုင်, စာသားကိုအပါအဝင်, ပုံရိပ်တွေ, လက်ဗွေ, လက်မှတ်, စသည်တို့ကို, နှင့်ကွန်ပျူတာဝေးကိုချိုးဖျက်ရာတွင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်.
ဘားကုဒ်ကဒ်ရိုးရှင်းသောအောင်, သာမန်ဘားကုဒ်ကို print ထုတ်သို့မဟုတ်ကူးယူအချို့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်, သို့သော်၎င်း၏ဖတ်ကိရိယာများ (အထူးသဖြင့် QR ကုဒ်ကိုသုံးစက်ကိရိယာများကိုဖတ်ရှု) စျေးကြီး. သံလိုက်ကဒ်နှင့် IC ကဒ်မတူဘဲ, ဘားကုဒ်ကိုကဒ်သတင်းအချက်အလက်မပြောင်းနိုင်ပါ, ဖြည့်စွက်ကာ, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်း, စံစုစည်းမဟုတ်ပါဘူး, အရာသည်၎င်း၏လျှောက်လွှာကန့်သတ်.
သတင်းအချက်အလက် load မှဘားကုဒ်နံပါတ်များဖြစ်ပါသည်, အက္ခရာများ, ဤအတောလည်ရာနှင့်အက္ခရာများအချို့စံအရေအတွက်ကို encoded string ကိုအညီအပြီးဖြစ်ပါတယ်.
ဘားကုဒ် encoding ကနည်းပညာကိုအဓိကအား coding စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့စံချိန်စံညွှန်းများကပါဝင်ပတ်သက်. ဘားကုဒ် encoding ကစည်းမျဉ်းဘားကုဒ်ဖော်ထုတ်ခြင်း၏အဓိကအခြေခံ၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အ codes တွေကိုစေရန်ဖြစ်ပါသည်.
(1) UPC ကုဒ်: 1973 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစနစ်အတွက်ပြည်တွင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလျှောက်လွှာအတွက်ဦးဆောင်. အဆိုပါကုဒ်စနစ်ကအဓိကအားဖြင့်စီးပွားဖြစ် system ကိုအသုံးပြုသည်. ဒီ code အရှည်များအတွက် fixed ဖြစ်ပါတယ် 12 ဂဏန်း.
(2) Ean ကုဒ်: 1977 ခုနှစ်မှာ, UPC ကုဒ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဥရောပစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းနိုင်ငံများဥရောပကုန်စည်ကုဒ် Ean ကုဒ်ရေးဆွဲပြီး. Ean ကုဒ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်: Ean-13 code နဲ့ Ean-8 ကုဒ်.
(3) ကြားညှပ်2၏5ကုဒ်: ဒစ်ဂျစ်တယ် Code ကို၏စဉ်ဆက်မပြတ်မိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုစနစ်၏တစ်ဦး variable ကိုအရှည်.
(4) ကုဒ် 39 (ကုဒ်3၏ 9): အရှည် variable ကို discrete မိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုအက္ခရာများစကားလုံးအမျိုးအစား Code ကိုစနစ်က.
(5) Codabar: ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုဒ်၏အရှည် variable ကို discrete မိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုစနစ်က. လေ့ဂိုဒေါင်တွင်အသုံးပြု, လေထုနှင့်ကှကျစီမံခန့်ခွဲမှုဖော်ပြ, အသွေးသည်ဘဏ်.
(6) ကုဒ် 128: စဉ်ဆက်မပြတ်အက္ခရာနံပါတ်ပါတဲ့ကုဒ်စနစ်၏တစ်ဦး variable ကိုအရှည်.
(7) တရုတ် Post ကို Code ကို: တရုတ် Post ကိုအထူး Code ကိုဖော်ပြ.
(8) အခြားအကျင့်ထုံး: ကုဒ် 93, ကုဒ် 49, ကုဒ်2၏ 5, 11 ကုဒ်, matrix2၏5ကုဒ်.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် RFID ဘားကုဒ်ကဒ်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, QR Code ကိုကတ်, ခရမ်းလွန်ပရင့်ထုတ်ရန်ဘားကုဒ်ပလတ်စတစ်ကဒ်
prev: အပြီးအစီး Tag ကို Luggage, လေကြောင်းလိုင်း Baggage ပြောင်းဖူး Clasp Tag ကို
နောက်တစ်ခု: သံလိုက်မြှောင် Card ကို